TRUESTORY: August 2013
Posted by Gentle Men at 4:54 PM No comments:
ဆိုးလ် သြဂုတ် ၃ဝ
တောင်ကိုရီးယား ပေါ့ပ်ဘုရင်မ လီဟိုရီနှင့်
သူမ၏ ချစ်သူ တေးရေးဆရာ လီဆန်ဆွန်းတို့
နှစ်ဦး သည် ဂျေဂျူးကျွန်းရှိ ၎င်းတို့၏ နေအိမ်၌
ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လီဟိုရီတို့ စုံတွဲ၏ မင်္ဂလာပွဲကို ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ကျင်းပသွား မည် မဟုတ်ဘဲ နှစ်ဖက်မိဘ များ၏ ရှေ့မှောက် တွင် ရိုးရှင်းသော မင်္ဂလာပွဲကို ကျင်းပသွား
White Card ကိုင်သူများ ပါတီဝင်ခွင့်၊ ထောင်ခွင့် မပြုရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် NLD မှ ထောင်ခွင့်ပြုသည့်ဖက်ကရပ်တည်ဟုဆို
၁။ white card ပါဝင်သူ ပါတီ ထူထောင်ခွင့်
၃။မဲခွဲ ဆုံဖြတ်ရာတွင် ၂၅%သော တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်များရာနူန်းပြည့်မတ်တပ်ရပ်ခဲ့ပြီး
Posted by Gentle Men at 11:34 AM No comments:
ဆက်သွယ်ရေး ၊ သတင်း အချက်အလက် နှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန ၊ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း မှ ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် ၁၀၀ ကျပ်တန် စာပို့ တံဆိပ်ခေါင်းသစ် ၄ မျိုး ၊ ၅၀၀ ကျပ်တန် စာပို့ တံဆိပ်ခေါင်း ၄ မျိုး ၊ ၁၀၀ ကျပ် နှင့် ၅၀၀ ကျပ်တန် ၈ လုံးတွဲ စာပပို့ တံဆိပ်ခေါင်းသစ် တစ်မျိုး စုစုပေါင်း အထူးထုတ် စာပို့ တံဆိပ်ခေါင်း သစ် ၉ မျိုး ကို စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ စတင်၍ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ် ၊ ခရိုင် နှင့် မြို့နယ် ဆက်သွယ်ရေး စခန်း (စာတိုက်) များ၌ ရောင်းချ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အထူး အစီအစဉ် တစ်ရပ် အနေဖြင့် နေပြည်တော် ဗဟို စာတိုက်ကြီး ၊ ရန်ကုန် စာတိုက်ကြီး နှင့် မန္တလေး စာတိုက်ကြီး
Posted by Gentle Men at 10:56 AM No comments:
အားလုံး စိတ်ဝင်စားသူ ၂၀၁၁ မတ်လကုန် အစိုးရအဖွဲ့သစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဟာ ဘာတာဝန်မှ ယူတာ မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ် တဲ့ တပ်မတော် တာဝန်က လည်း လုံးဝ အနားယူသွားပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အသစ်
Posted by Gentle Men at 10:52 AM No comments:
Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါဟာ လက်ရှိအချိန် အထိ ပရိသတ် ပေးတဲ့ မဲအများဆုံး ၂ သိန်းကျော်နဲ့ ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ ပြေးနေပါတယ်။
အဲဒီ ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ Miss Myanmar ခင်ဝင့်ဝါ ဟာ အသက် ၁၉ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ရုက္ခ ဗေဒ ကျောင်းသူ တဦးဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်လ် တဦးလည်း ဖြစ်သလို Miss Myanmar သရဖူကိုရရှိပြီးချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးရုရှနိုင်ငံ ဘီ လာရုစ်မှာသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂုဏ်ဆောင်
Miss တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ခင်ဝင့်ဝါက “ပရိသတ်ကြီး မင်္ဂလာပါ။ ညီမကို အားပေးတယ်ဆိုရင် အောက် က Link က တဆင့် အနီရောင် စာလုံးကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ညီမကို Vote ပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မဲပေးနိုင်ပါ တယ်၊ သြဂုတ် ၂၆
Posted by Gentle Men at 10:23 AM No comments:
တောင် ဘက် ရေမိုင် ၂၁ မိုင် အ ကွာတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် သင်္ဘော ၂ စီးသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ရာ သင်္ဘော သားများက ဗီယက်နမ် သင်္ဘောတစီးပေါ်သို့ ဒီဇယ်ဆီ
Posted by Gentle Men at 10:19 AM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း Night Club များသာမက ယခုနောက်ပိုင်း Day Club များပါ
Posted by Gentle Men at 10:15 AM No comments:
မြန်နှုန်းမြင့် INTERNET ဖြစ်ဖို့၊ WEB PAGE တွေ LOADING လုပ်တာမြန်စေဖို့၊ ပုံတွေပေါ်တာ မြန်စေဖို့ စိတ်ကူးရှိရင် သင့် BROWSERကို နည်းနည်းချိန်ညှိပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဒီ ဆောင်းပါးက BROWSER အနေနဲ့ FIRE FOX ကို သုံးထားတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ။ မရှိလဲ DOWNLOAD ဆွဲပြီး
အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား ကားဖြင့်တိုက်၍ သတိလစ်နေစဉ် မုဒိမ်းကျင့်သွားသည်ဟု ယူဆရသူတစ်ဦး၏ ဓါတ်ပုံအား ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ထုတ်ပြန်ထား
၂၉-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၈၀၀ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကတေမြို့ နယ် အမှတ် (၁) ရဲစခန်းသို့ အမည်မသိလူငယ် တစ်ဦး ရောက်ရှိလာကာ မိန်းကလေး ငယ်တစ်ဦးကားတိုက်ခံရပြီး လမ်းဘေးတွင် လဲကျနေကြောင်း၊ ကားမှာတိုင်းရင်း သားကျေး ရွာဖက် ဘက်သို့မောင်းနှင်ထွက်ပြေး သွားကြောင်း လာရောက်တိုင်တန်း သဖြင့်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက လမ်းကြောင်းပေါ် ရှိ ရဲစခန်း/ရဲကင်းများအား ပိတ်ဆို့ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ရပ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးရာ ရှုခင်းသာ အပန်းဖြေစခန်း အနီးတွင် သာကေတမြို့နယ်နေ မခင်ဝင်းမာ (၁၇)နှစ်အား ယာဂျိုစောင်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာရရှိပြီး ၀တ်လစ်စလစ်ဖြင့် သားမယားပြုကျင့်ခံထားရသည့် အနေ အထားဖြင့် သတိလစ်နေသည်ကိုတွေ့
မော်စကို၊ သြဂုတ် ၂၈
The Voice Weekly ဆီးရီးယားနိုင်ငံကို အနောက်နိုင်ငံများက စစ်ရေးအရ အရေးယူမည်ဟု သတိပေးချက်များ ထွက်ပေါ်နေချိန်တွင် မြေထဲပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းဒေသသို့ ဒုံးကျည်တင် စစ်သင်္ဘော တစ်စင်းနှင့် ရေငုပ်သင်္ဘောရန် ကာကွယ်ရေး စစ်သင်္ဘော တစ်စင်း စုစုပေါင်း နှစ်စင်းကို
Posted by Gentle Men at 8:26 PM No comments:
မ္မတဘာရှားအယ်လ်အာ ဆတ်အစိုးရအား ဓာတုလက်နက် ဖြင့် တိုက်ခိုက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ အပြစ်ပေးမည် ဟု ပြောကြားမှု များ မြင့်တက်လာနေချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာက အ နောက်နိုင်ငံများက တိုက်ခိုက် မည့်
Posted by Gentle Men at 8:19 PM No comments:
အမေရိကန်၏ အဓိက မဟာမိတ် နိုင်ငံတစ်ခု လည်း ဖြစ်သည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ
၏ သမ္မတ ဖရန်ကွိုက်စ် ဟော်လန်ဒေးက မိမိတို့သည် ဓာတုလက်နက်များ အသုံးပြုခဲ့သည့် ဆီးရီးယား အစိုးရအပေါ်
Posted by Gentle Men at 8:14 PM No comments:
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ထည့်ခဲ့တဲ့ ကျုပ်မဲပြားလေးကို ဖြစ်နိုင်ရင် ပြန်တောင်းချင်တယ်ဗျာ။
NLD ကို မမုန်းပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို မယုံတော့ဘူးဗျ။
သူတို့ဟာ ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ နဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေ တရားဝင်ဖြစ်ဖို့လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားပြီး အမျိုးသားရေး ကို ထည့်မတွက်ဘူး-ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ထည့်ခဲ့မိတဲ့ "မဲပြား"လေးအတွက်
Posted by Gentle Men at 8:00 PM No comments:
ရေးသူ လူထု မောင်ကာဠု အချိန် 06:15
Posted by Gentle Men at 7:58 PM No comments:
ခု ဒီ Post ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ပထမ မဲအများဆုံးမှာ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံသူ Paulmier Heloise ပေါ်မိလာ ဟယ်လို့ဝစ် ဖြစ်သည်။ Ms. Paulmier Heloise မှာ
Posted by Gentle Men at 7:53 PM No comments:
ယနေ့ညနေ6နာရီင်္ခန့်က မလေးရှားနိုင်ငံ ဂျိုဟိုး ulu tiram ၊ Taman Perindustrian Cemerlang ရှိ Permenpronic Technologies Sdn. Bhd စက်ရုံအား ဝင်ရောက်ဖမ်း စီးမှု စတင်ကြောင်း စက်ရုံရှိ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦး၏ ပြောပြသတင်းပေးချက်အရ သိရသည် ။
ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသားများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား စုစုပေါင်း 70 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီး စက်ရုံရှိ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် သူဌေးကိုပါ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည် ။
ုပြီးခဲ့သည့် 28.8.2013 စတားသတင်းစာမှ ကြော်ငြာချက်အရ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သာ စတင်ဖမ်းဆီးမည် ဟုကြော်ငြာထားခဲ့သော်လည်း ယခု ဂျိုဟိုးတွင် ညနေပိုင်း
Posted by Gentle Men at 7:49 PM No comments:
တလစပ် တက်တက် နေတဲ့ ....သတင်းတွေကို ကြည့်ရင်း .....
သတင်း အဆိပ် ခတ်ခံနေရတဲ့ ခေတ် ကို.....
ရောက်သွားပြီ ပဲလို့ တွေးမိလိုက်ပါတယ်.....
သတင်းရေးသူ တစ်ချို့ ကတော့ ....
မှန်ကန် တိကျမှုကို .....
လျှင်မြန်မှုထက် ပိုအလေးထားတာ တွေ့ ရပေမယ့် ....
အများစု က တော့ .....
ချဉ်ချဉ် တူးတူး ... ဦးရင် ပြီးတာပဲ ဆိုတဲ့ ....
Posted by Gentle Men at 7:44 PM No comments:
NLD ပါတီတွင် မွတ်စလင်များရှိနေသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်မှပြောကြား
''ဟိုတုန်းကလည်း အဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာ ကွန်မြူနစ် ပါတီဝင်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြ တယ်။
ဒါက ရှိချင်လည်း ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါ က ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ အခုချိန်မှာ လည်း အဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေ မရှိဘူး မဟုတ်ဘူး။ ရှိတာပဲ။ ဒါပေ မဲ့ အများ ကြီး ရှိနေတာ မဟုတ်ဘူး။"ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးဟံသာမြင့် က Daily Elevenသတင်းစာအား ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Gentle Men at 7:40 PM No comments:
ရေဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နှိုင်တဲ့ အလားအလာမြင့်မားတဲ့ နေရာတွေ
ဆရာဒေါက်တာထွန်းလွင် ပြောပြတဲ့ မိုးလေ၀သအခြေအနေပါ။ ရေးဘေးတွေ့နိုင်သေးလို့ အားလုံးသတိရှိ နေဖို့ပါခင်ဗျာ။ ဆရာ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိုးနှောင်းရာသီအ၀င်နဲ့ မုတ်သုံ ဆုတ်ခွာ ဖို့အပြင်အဆင်တွေတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးပွဲကြမ်းနေခဲ့တဲ့မုတ်သုံဟာအခုတော့ပွဲများပမ်းသွားလေပြီလားလို့ ပြောရ လောက်အောင်မိုးရော၊ လေရော၊ ရေရောတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လျော့ ကျ လာနေပြီ ဖစ် ပါ
Posted by Gentle Men at 7:37 PM No comments:
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့က ဆီးရီးယားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ အရေးယူ တိုက်ခိုက်မည်ဆိုသည့်သတင်းကြောင့်
ရေနံစိမ်းဈေးနှင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး များ မြင့် တက်ခြင်းနှင့် အတူ ပြည်တွင်းရွှေဈေးလည်း ဆက်တိုက် တက်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ
အသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့ရွှေ တစ်အောင်စလျှင် ၁၃၉၅ ဒေါ်လာနှင့် ပည်တွင်း အခေါက်ရွှေ
Posted by Gentle Men at 7:32 PM No comments:
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွေဟာ ဆီးရီးယား အရေး တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲကို ဒုတိယနေ့ အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် စစ်ရေးအရ အရေးယူဖို့အတွက်တော့ တညီ တညွတ် တည်း ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်သေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကြာသပတေးနေ့ အစည်းအဝေးဟာ တနာရီတောင် မကြာခဲ့သလို
Posted by Gentle Men at 7:29 PM No comments:
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ ပြန်ဆွေးနွေးရန် ကော်မရှင် တောင်းဆို
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆက်ဆွေးနွေးရန် ဆိုင်းငံ့ထား သည့် ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်း ဥပဒေကိုဆက်လက် ဆွေးနွေးပေးရန် ပြည်ထောင်စု
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ စာပို့
တောင်းဆို ထားကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် မိမိတို့ မဲဆန္ဒနယ်အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကို ရွေးကောက်
Posted by Gentle Men at 7:27 PM No comments:
၂၇-၈-၂ဝ၁၃ နေ့ထုတ် စံတော်ချိန်သတင်းစာ
တွင် ''အလယ်တန်းပြဆရာမရာထူးမှ ထုတ်ပယ်
ခဲ့မှု တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမအသင်း ကန့်ကွက်
ရှုတ်ချ'' ခေါင်းစဉ်ပါ သတင်းအပါအဝင် ပုဂ္ဂလိ ကသတင်းစာနှင့် စာစောင်အချို့တွ င် ဖော်ပြ ပါရှိခဲ့သော အမှတ် (၅) အခြေခံ ပညာ အထက်တန်းကျောင်း နေပြည်တော်မှ အလယ်တန်းပြ ဒေါ်စိုးစိုးခိုင် ၏ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရှင်းလင်းချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
Posted by Gentle Men at 7:24 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 7:18 PM No comments:
ဥပဒေမဲ့ရမ်းကားသောဂိုဏ်း များက ထိုင်းရွာ တစ်ရွာရှိ အိမ်များ ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ ပစ္စည်း ပစ္စယများအား အလစ်သုတ်ခြင်း တို့အပြင် ရွာသားများကိုလည်း တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ကျူးလွန်သူမှာ လူမဟုတ်ဘဲ မျောက် များဖြစ်နေသည်။
''သူတို့က ကျွန်တော်အိပ် နေတာမြင်ရင် ကျွန်တော့်အိမ်ထဲ ဝင်လာတယ်။ မီးဖို ထဲကိုသွားပြီး ဟင်းချက်ဆီ၊ သကြားတွေအပြင် ဗီရိုထဲမှာ ဝှက်ထားတဲ့ဆေးတွေကို တောင်ယူတယ်''ဟု ရွာသူတစ်ဦး ဖြစ်သူ ချာလူ ယေးခမ်ကာဂျစ်
Posted by Gentle Men at 7:15 PM No comments:
Posted by Gentle Men at 2:23 PM No comments:
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် Privacyများ ပေါက်ကြားမှုအတွက် Facebookက လျော်ကြေး ဒေါ်လာ သန်း(၂၀)ဝန်းကျင်မျှ ပေးချေသွား
မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ကမ္ဘာကျော် Social Networking ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးကို သုံးစွဲနေသူများအနက် ခန့်မှန်းခြေ (၆၁၄၀၀၀)မျှသည် ၎င်းတို့၏ အမည်များနှင့် အခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် များ ကို ကြော်ငြာ
Posted by Gentle Men at 2:14 PM No comments:
ခြုံရေး အ တွက် Microsoft ကုမ္ပဏီမှ အာ ရှဒေ သ ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးနှင့် အကြံပေး အရာရှိချုပ် Mr.Pierre Noel သည် မြန် မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကာ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဟောပြောပွဲ တစ်ရပ် ကျင်း ပ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ
Posted by Gentle Men at 1:57 PM No comments:
ရေကူးဝတ်စုံဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့သော Miss Supranational 2013 မှ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် မခင်ဝင့်ဝါ
ကင်တားနားရဲ့ကားကိုရိုက်ပုတ်တာဟာ မဖြစ်သင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ ကားကို မိတ္ထီလာမှာ ရိုက်ပုတ်ခဲ့ကြတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တဲ့လုပ်ရပ်တခုပဲလို့ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဝေ ဖန် လိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ မစ္စတာ ကင်တားနားတို့ နှစ်ဦးနှစ် ဖက် ပြော ကြား ချက်တွေ ကွဲလွဲနေတာကိုလည်း သတိပြုမိတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
"အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ထုတာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။မစ္စတာ ကင်တားနားက ထုတယ်လို့ပြော တယ်။ မိတ္ထီလာကရတဲ့ သတင်းက ထုတာလို့ ပြောတယ်။ဒီဟာက မလုပ်သင့် ဘူးပေါ့။စာပေးချင်လဲ
၁. မကောင်းသော ဗီဇနှင့် ၀ါသနာ အားကြီးခြင်း။
၂။ တိကျသော ရည်မှန်းချက်မရှိခြင်း။
၃။ သာမန်ထက်ပို၍ တိုးတက်လိုစိတ်မရှိခြင်း။
၄။ လုပ်ငန်း/ ဘ၀တိုးတက်မည့် အထောက်အကူပညာမတတ်ခြင်း၊
၅။ ဇွဲ၊ လုံ့လ၀ီရိယနှင့် စည်းကမ်းမရှိခြင်း။
၆။ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း ( ကျန်းမာရေး ထိ ခိုက်အောင် နေထိုင်စားသောက်ခြင်း)
၇။ မကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရခြင်း
၉။ အဓိကမဟုတ်သော အကြောင်းအရာအပေါ် ဆန္ဒပြင်းအားထည့်လွန်းခြင်း။
ည ၁၀ နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ နေပြည်တော်မြို.မဈေးကနေ ပြန်လာတော့ လမ်းမှာ ကျောင်း တုန်းကအတူတူနေခဲ့တဲ့ သူငယ်ခင်း ၂ ယောက်နဲ.ပြန်တွေ.တယ်။ မတွေ.ရတာကြာနေပြီဖြစ် တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ ၀မ်းသာအားရနဲ. တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် အော်ကြီးဟစ် ကျယ်နှုတ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ စစ်တမ်းများ အရ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုနေသည့် အရေအတွက် မှာ ၄ သန်းကျော်မျှသာ ရှိပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်း၏ သိပ်သည်းဆမှာ ၇.၀၁ ရာ
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်စရာ မလိုဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီ
သြဂုတ်လ (၂၈) ရက်နေ့ထုတ် The Messenger သတင်းစာ မှဖော်ပြသည်။လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် များနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသာ မက နိုင်ငံ့အရေး ကို စိတ်ဝင်စား သူများ အားလုံး၏ ဆုံချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး သို့ ရောက် ရှိနေလေပြီ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလေးထား ပြောကြားနေကြသည့် အထဲတွင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတော် သမ္မတဖြစ်နိုင်စေရန် ပုဒ်မ ၅၉(စ)ကို ပြင် ဆင်နိုင်ရေးလည်း အဓိက ပါဝင်နေပါသည်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်
ခရစ္စတိုဖာ ဂါးန်နက်လက်သစ် သိပ်ဖြစ်ချင်နေသလား ကိုကျော်မင်းဆွေ
ဒီထက်မက ပြောရမယ့်အခြေနေရှိလာ လို့ပါ။ ကန့်ဘလူကိစ္စကို ကိုကျော်မင်းဆွေ ဖွတာပိုကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက်ပါ။သူ face bookမှာတင်လိုက်တဲ့ statusကို မိတ္တူထပ်ဖြန့်နေတာ ပလူပျံနေ တယ်လို့ တစ်ချို့သော အင်တာနက်သတင်းရပ်ကွက်တွေကကြားသိနေရတဲ့အပြင် သူ့အမှားသူ မမြင်ဘဲ ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုး အချိုးတွေ ဒီနေ့လည်းထပ်ချိုးနေတော့ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုသလိုပဲ ကျွန်တော်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်တင် ပါတယ်။သူဝေါလ်မှာလည်း
Posted by Gentle Men at 9:00 AM No comments:
ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြင်ဆင်နေပြီး မဟာမိတ်နိုင် ငံများ ကိုလည်း စည်းရုံးထားကြောင်း သိရ
ဆီးရီးယားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်သွားဖွယ်ရှိကြောင်း
ယခုလဆန်းပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတမှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်
ဆီးရီးယားကို အမေရိကန် တိုက်ခိုက်ပါက ကျဆုံးခန်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အာဆတ် ပြောကြား
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေဖြင့် ဆီးရီးယား နိုင်ငံအား ကြားဝင် တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက ကျဆုံးခန်းနှင့်သာရင်ဆိုင်ရမည်ြ
ဖစ်ကြောင်းဆီးရီးယားသမ္မတ ဘာရှာအယ်လ်အာဆတ်ကတွေ့ ဆုံမေးမြန်း ခန်း တစ်ခုတွင် ပြောကြား လိုက်သည်။အဆိုပါ မှတ်ချက်ပြု စကားကို သြဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် ထုတ်ဝေသော ရုရှား သတင်း စာ
သားစိုးရဲ့ စီးပွားရေးအလုပ်တခု ဖြစ်တဲ့ ရွှေပိုးနန်းတော် ပိုးထည် တိုက်ကနေ ၂ သောင်းကျပ်ဖိုးနဲ့ အထက် ဘယ်ပိုးထည်၊ ချည်ထည်မဆို
Posted by Gentle Men at 8:35 AM No comments:
သြဂုတ် ၂၆ ရက်က ကျင်းပသော အမျိုးသား လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံသားမဟုတ် သူများအား နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်ကို
ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံဆွေးနွေး ရန် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် အာဏာ ရပြည် ခိုင် ဖြိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အများစုက မထောက်ခံသော်လည်း တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးထောက်ခံ၍ လွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြား
အများပြည်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာမဆို အမြဲရှေ့ဆုံးကရှိနေမှာပါတဲ့။
လည်း မြေပြိုလိုက်၊ လမ်းပိတ်
လည်း ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် တပ်မတော်သားတွေပဲ ထိပ်ဆုံးက ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတာ
တစ်ရက် မြို့ထဲက မြောင်းကို
ရေစီးရေလာကောင်းအောင် ၀ိုင်းပြီး ဆယ်နေကြတဲ့ တပ်မတော်သား အရာရှိ၊စစ်သည်တွေကိုတွေ့တော့
မေးကြည့်တယ်။ အစ်ကိုတို့ဒီလိုဆယ်နေရတာ ဘယ်သူခိုင်းလို့လဲဆိုတော့ ခိုင်းမှလုပ်စရာလားဗျာ ၊ မြောင်းပိတ်လို့ဒုက္ခရောက်ရင်
Sexy Model Girl- Chaw Nge Nge Hein ၏ လှပသော ဓါတ်ပုံလေးများ
Facebook Lock ကျနေသူများ နှင့် ဖုန်းနံပတ်တောင်းပြီး Code ဖြည့်ခိုင်းနေပါတယ် ဆိုတဲ့သူများအတွက် ဖြေရှင်းနည်းအသစ် ( 9.7.2013 )
Facebook Lock ကျပြီး ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Code တောင်းပါတယ်
အခု Facebook ကနေပြီးတော့ Security ထက်မြင့်လိုက်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်
အခုဟာက Facebook ကဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်
ပြီးရင် massage ပြန်မပို့ပါဘူး
တကယ်လို့ ပြန်မပို့ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်အကောင့်တော့
သွားပါပီ သုံးမရတော့ပါဘူး တော်တော်လေးကို
ဆီးရီးယား နိုင်ငံ ကို ၇၂ နာရီ အတွင်း လေကြောင်း ၊ ရေ ကြောင်း တိုက် ခိုက်မှု စတင် တော့ မည်
တိုမာဟောခ်ဒုံးကျဉ် လေးစင်း အား တစ်ပြိုင်နက်တည်းပစ်လွှတ် နိုင်
သည့် စစ်သင်္ဘော များ မြေ ထဲ ပင် လယ် အရှေ့ဘက် ခြမ်း ကို ရောက် ရှိ ပြီး နောက် ဆီးရီးယား ကို အ ကန့်အသတ် ရှိသည့်စစ်ရေးအရေး ယူ မှု ရက် အနည်း ငယ် တွင်း စ တင် တော့ မည် ဟု ပင်တဂွန် ထိပ် တန်း အရာရှိ များ က CNN သ တင်း ကို ပြောသည်။
ရုရှား နိုင်ငံ က အမေရိကန် ၏
Posted by Gentle Men at 8:06 AM No comments:
ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yahooအနေနဲ့ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့(Recycle လုပ်ထားတဲ့) Usernameတွေကို တရားဝင် ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က ဆိုရင် Usernameတစ်ခုခု လိုချင်တဲ့အခါ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Usernameနဲ့ တူနေတာတွေ ရှိလို့ အကောင့်ဖွင့် မရတဲ့သူတွေ အတွက်
လွယ်တယ်ဆိုတာ ထက်ထက် အထင် ဟစ်ဟော့ပ် ဂီတက ဆော့ဝဲလ်နဲ့ သီချင်းကို ဖန်တီးရတာပေါ့နော်။ အဲလိုကျတော့ သီချင်းဖန်တီး သူတွေဘက်က သူတို့အတွက် တီးလုံးတစ်ခုကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရှာနိုင်တယ်။ အဲဒီလိုရွေးရဆိုရ ခပ်လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်လို့ရတာ ပေါ့။ အဲဒါမျိုးလေးတွေကြောင့် အလွယ်တကူနဲ့
Posted by Gentle Men at 7:59 AM No comments:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ် ၊ အင်ဒိုင်းကြီးကျေးရွာတွင် သြဂုတ်လ (၂၄)ရက်နေ့က တမူးမြို့မှ ကလေးမြို့သို့ ကားဖြင့် သယ်ဆောင်လာသော ဆူဒိုအက်ဖီဒရင်းဆေးပြားများကို ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း မူးယစ်အထူးတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
ကလေးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုဖြင့် အင်ဒိုင်းကြီးကျေးရွာ တန်ပိုဂိတ်တွင် စောင့် ဆိုင်း ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေရာ တမူးမြို့မှ ကလေးမြို့သို့ယာဉ်မောင်း ကျော်နိုင်ဝင်း ၊ ယာဉ်နောက်
စစ်တပ်ထာက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစား အယောင်ဆောင်ကာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးများ ပိုင်သည်ဟု ဆိုပြီး မြေကွက်လိမ်လည်သူများ ဖမ်းမိ
နိင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ လူကြီးများကို ပိုင်သည်ဟုဆိုပြီး မြေကွက်များ ကို ဈေးနှုန်းချိုသာ စွာဖြင့်ရ မည် ပြောကာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္မဏီ တစ်ခုမှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ထံမှ ငွေကျပ်သိန်း ၃ဝဝကျော်ကို လိမ် လည် သွားသူနှစ်ဦးအား မရမ်း ကုန်းရဲစခန်းမှ ဩဂုတ်၂၃ရက်က စတင်အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေပြီဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း (၈) ရပ်ကွက်နေ
ဦးအောင်သိန်း ၇၅ နှစ်ဆိုသူထံမှ ဒလမြို့နယ်
တော်နေ ဦးသိန်းလွင်တို့နှစ်ဦးက ၄င်းတို့သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ နှင့်ပိုင်ကြောင်း၊ အကြီးအ ကဲများ နှင့် အလွန်ရင်းနှီးကြောင်း၊ ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်းတပ်မတော် ထောက်လှမ်းေ
ရးမှူး ဗိုလ်မှူးအ ငြိမ်းစားနှင့် ဗိုလ်ကြီးအငြိမ်းစား များဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာ မြေ ကွက်နှင့်ပတ် သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများပြပြီး မြေတစ် ဧကကိုနိုင်ငံတော်မှသတ်မှတ်ထားသည့်
Posted by Gentle Men at 7:52 AM No comments:
သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ စစ်တမ်းအ ရ ဖေ့စ်ဘုတ် အသုံးပြုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပေါင်း ၁ သန်း ၄ သောင်း ရှိသည်ဟု Clean Text (Facebook) စာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်း၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသား ၆ သိန်း ၂ သောင်းနှင့် အမျိုးသမီး ၄ သိန်း ၂ သောင်းမှာ ဖေ့စ်ဘုတ် အသုံးပြုနေ သည်ဟု သိရသည်။ အသက် ၂၁ နှစ်မှ အသက် ၃၀ အကြား ဖေ့စ်ဘုတ် အသုံးပြုသူမှာ ၂ သိန်း ၄ သောင်းရှိပြီး အသက် ၅၀ နှင့် အထက်
Posted by Gentle Men at 1:37 PM No comments:
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာအတည်ပြုပြီးဖြစ်တဲ့ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲတဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကိုဒီကနေ့အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာပါအတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပါအတည်ပြုပြီးသမ္မတ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရင်တော့ဒီဥပဒေကို ပြဌာန်းဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး က ပြောပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့မဆုမွန်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲတဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်သူ့
ထူးထူးခြားခြား Ringtone လေးတွေ ရနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Ringtone တွေ ကလည်း သုံးစွဲသူရဲ့ကြိုက် နှစ်သက် မှု ပေါ်မူတည် ပြီးတော့ ပြောင်းလဲ တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဘယ်လို Ringtoneကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူပဲ
တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံ
အာဆီယံ၏ တစ်သင်းတည်းသော ခြေစစ်ပွဲအောင်မြန်မာအသင်း AFC U-22 Championship တွင် အိမ်ရှင်အိုမန်နှင့် တအုပ်စုတည်းကျ
အာရှ အသက် ၂၂ နှစ်အောက် ချန် ပီ ယံရှစ် AFC U-22Championship 2014 နောက်ဆုံးအဆင့် ပွဲစဉ်များ အား အိုမန် နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ဇန်န ၀ါရီလအတွင်းကျင်းပသွားမည် ဖြစ် ရာ ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင် ထား သည့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ-၂၂ အသင်းသည် အိမ်ရှင် အိုမန်အ သင်းနှင့် အုပ်စု(က)တွင် ကျရောက် လျက် ရှိပြီး အဖွင့် ပွဲစဉ်ကိုလည်း အိုမန် အသင်းနှင့် ဇန်န၀ါရီ ၁၁
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်တာ ၃လ ၀န်းကျင်လောက်ရှိပါပြီ။ မြန်မာပြည် ကိုပြန်ရောက် လို့ ထူးထူးခြားခြားတွေ့လာရတာတွေ ကတော့ မော်တော်ကားလမ်းတွေကြပ်တာ၊ စည်းကမ်း မရှိတာတွေ အပြင် သတင်း စာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေမှာ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ခံမှု စတဲ့ စကားလုံးအသုံး အနှုန်းတွေ အများအပြား တွေ့နေရပေမဲ့လို့ လက်တွေ့ကျင့် သုံးလိုက်နာမှု မရှိတာတွေ၊ နောက်ပြီး လူလေး သုံးယောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ အသင်းအပင်း ဖွဲ့စည်းနေ တာတွေ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂပေါင်းစုံ၊ MPC ဆို တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင် တာ တွေမှာဆွေးနွေးပွဲခေါင်း စဉ်တွေ အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု ဆိုတဲ့အသံတွေ၊ ဆူညံရှုပ်ထွေးစွာ ကြားသိမြင်တွေ့ လာရပါတယ်။ အဲဒီ အထဲက အထူးခြားဆုံးနဲ့ စိတ်ဝင်စားဆုံးကတော့ မြန်မာပြည်ကို ပြည်နယ် (၈) ခုသတ်မှတ်ဖို့၊ တန်းတူ အခွင့်
Posted by Gentle Men at 8:02 AM No comments:
From : .. http://myanmarheadline.blogspot.com/2013/08/nld_26.html
NLD ပါတီခေါင်းဆောင် တစ်ဦြး ဖစ်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အလွန် သူမအနိုင်ရရှိပါက သမ္မတ လုပ်ချင်ကြောင်းပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် သူမ သမ္မတလုပ် ချင်ကြောင်း တရားဝင်ဖွင့်ဟပြော ဆိုလာခြင်း ဟာ သူမပြောသလို ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းရှိ လို့ ပြောဆိုလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရယင် လက်ရှိ အစိုးရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတပ်မတော် ကို စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ ၂၀၁၅ အလွန်မှာ သမ္မတ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ ယုံကြည် ချက်တွေ
ရန်ကုန်တိုင်း စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ မြို့ နယ် ၃၃ ခု တွင် ဆိုင်ကယ် စီးနင်းမှုများကို အရေးကြီးသွင်းကုန် ဥပဒေပုဒ်မ(၈)အရ ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် အထိ ပြစ်ဒဏ်ချအရေးယူမည်ဟု သက်ဆိုင် ရာဒေသ အာဏာပိုင်များက ကြေညာ ထားသည်။
လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ် စီးနင်းသူများကို ယခင်က ဆိုင်ကယ်များကိုသာ ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း
Posted by Gentle Men at 6:55 PM No comments: